यो भिडीयो हेर्नुहोस् पूर्ण पहुँच प्राप्त गर्नका लागि अन्त!
विशेष लन्च मूल्यः $ 67
यो एक-पटक खरीद हो। त्यहाँ कुनै मासिक भुक्तान वा लुकाइएका शुल्कहरू छैनन्।
प्रोजेक्ट विचार र प्रेरणाको एक लाइफटाइम प्राप्त गर्नुहोस्!
16,000 चरण योजनाहरु द्वारा चरण
A देखि Z निर्देशनहरूको साथ विस्तृत डिजाइन woodworking सुपर फास्ट, सुपर सजिलो र सुपर मजा गर्दछ! समयकाे बचत गर।
वर्तमानमा तपाईले लिनु भएको समयको सानो अंशमा पुरस्कार विजेता काठ परियोजनाहरु सिर्जना गर्नुहोस्। सबै प्रकारको परियोजनाहरू बनाउनुहोस्, आफ्नो विश्वासको निर्माण गर्नुहोस् र तपाईंको woodworking कौशलहरू सिद्ध गर्नुहोस्।
ब्लिपप्रिन्ट र सामग्री सूची
काठ नक्काशी प्रविधिहरू
समय र पैसा बचत गर्नुहोस्! हाम्रो अनुकूलन डिजाइन र विस्तृत ब्लुप्रिन्टहरू तपाईले गलत काठ, गलत सामग्री र गलत उपकरणहरूमा आफ्नो कडा अर्जित नगद बर्बाद गर्न रोक्नु भएको छ।
थप समय निर्माण खर्च गर्नुहोस्, कम समय फ्रिटिङ! तीव्र, रंगीन लेला-तपाईं-द्वारा-हात ब्लुप्रिन्टको साथ छिटो जान्नुहोस्। ....
कौशल स्तर बिग्रेको छैन!
टेडिको विस्तृत, woodworking योजनाहरु र ब्लुप्पहरू पछ्याउन सजिलो मा कुनै पनि अनुमान लगाइएको काम छैन - जसले शुरुआती र प्रोफेसरहरूको लागि उपयुक्त बनाउँछ।
तपाईं सुन्दर woodworking परियोजनाहरु निर्माण गर्न को लागी वा सहभागी हुनुपर्दैन!
अहिले 16,000 योजनाहरूमा तत्काल पहुँच पाउनुहोस्
फेसबुक प्रशंसकहरूबाट प्रशंसा
"आज बजारमा यी योजनाहरू जस्तै ईर्ष्या छैन "
यो एक बयान हो कि म हल्का देखि छैन। तर मैले पहिले उल्लेख गरें, मैले राम्ररी बजार र सबै प्रतिस्पर्धी उत्पादनको अनुसन्धान गरेको छु।
सत्य हो, म लगभग 36 वर्षको लागि बढ़ईरहेको छु, र मैले 10 हजार भन्दा कम डलर को लागी केहि पनि पाएको छैन ।
यहाँ तल्लो रेखा हो : यदि तपाई आफ्नो woodworking परियोजनामा ​​सुरू गर्ने योजना बनाउनु भएको छ, यो केहि चीज होइन जुन तपाईं प्रयोग गर्नुहुनेछ, यो केहि चीज हो जुन तपाईंलाई पागल हुँदैन।
यस तुलनात्मक चार्टमा हेर्नुहोस्:
"हो" भन्नुहोस्। बस "शायद" भन्नुहोस् र यसलाई एक रिजल्ट -मुक्त परीक्षण-पूर्ण 60 दिनको लागि ड्राइभ दिनुहोस्!
100% आयरन क्लड पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी
मलाई शब्द "ग्यारिटी" हरेक ठाँउ देखेर घृणा गर्दछु। यसको मतलब के हो? केवल शब्दहरू। तपाईंलाई खरीद गर्न प्लैटलाइटहरू। त्यसैले, मैले तपाईंलाई एक गारंटी भन्दा बढी बनाएको छु। यो तपाईंको लागि एक व्यक्तिगत प्रतिज्ञा हो।
यदि यो भर्खरै पूर्ण woodworking स्रोत तपाईले कहिल्यै देख्नुभएन भने, मात्र मलाई इमेल गर्नुहोस् र म तपाईंको पैसाको 100% फिर्ता फर्काइदिनेछु। कुनै प्रश्नहरू सोधिएन। यो मेरो पूर्ण 60 दिन IRON-CLAD तपाईं पैसा फिर्ता फिर्ता ग्यारेन्टी।
PS: म भविष्यमा सबै योजनाहरू र बोनसहरू बेच्न पाउनेछु $ 67- $ 97 हरेक हप्ता र महिनाहरूमा अगाडि (म तिनीहरूका धेरै धेरै छन्)। अब गहिरो छूटको लागि आफैलाई लक गर्नुहोस्!
पीपीएस: सम्झनुहोस् .. तपाईंसँग मेरो 100% जोखिम नि: शुल्क असत्यकालीन पैसा-फिर्ता ग्यारेन्टी छ । म 110% यकीन छ कि तपाईं क्रिसमसको बिहान5वर्ष भन्दा पुरानो हुनेछ तपाईंको प्याकेजको साथ। तर यदि कुनै कारणको लागि तपाईं छैनन् भने, कुनै चिन्ता छैन। तपाईंको निवेश पूर्ण 60 दिनको लागि निश्चित छ।
काठ नक्काशी भिडियोहरू
PPPS: यो एक समय-संवेदनशील प्रस्ताव हो! तपाईं परिचय पत्रको अन्त्य पछि एक पटक फेरि यो प्याकेजमा लगानी गर्ने अवसर पाउनेछैन। कृपया यस पृष्ठलाई क्लिक नगर्नुहोस् जबसम्म तपाईं सकारात्मक रूपमा यो हो कि तपाईं यस प्रस्तावमा सँधै जान चाहानुहुन्छ। मलाई पूर्ण TedsWoodworking किट दिनुहोस् »
वास्तविक ग्राहकहरू। वास्तविक प्रशंसा।
परियोजनाहरु को प्रकार आज तपाई भवन निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ:
र धेरै हजारौं ...
योजनाहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ कि सूची:
बिलियर्ड / पूल तालिका
पुस्तक प्रकरण योजनाहरू
बेबी परिवर्तन तालिका
बिल्ली घर योजनाहरु
सीडी / डीभिडी धारक
बालबालिकाको कोठा योजना
कफी तालिका डिजाइन
चिसो फ्रेम योजनाहरू
Fireplaces र Mantel
गन लुकेको भण्डारण
गृह कार्यालय परियोजनाहरू
मिडिया केन्द्र डिजाइन
दृश्य स्क्रोल गर्नुहोस्
साइन्स र डिस्प्ले
स्क्वायरल डेन बक्स
काठ नक्काशी युक्तिहरू
काठ को खिलौने
- भिडियो फर्कनुहोस् -
समर्थन - टेड - सदस्य लगइन - सहबद्धहरूको बारेमा
प्रतिलिपि अधिकार © TedsWoodworking.com। सर्वाधिकार सुरक्षित।
गोपनीयता - सर्तहरू - DMCA
ClickBank यस साइट मा उत्पादनहरु को रिटेलर हो। CLICKBANK® 917 एस लुस्क स्ट्रीट, सुइट 200, बोइइ इडोहो, 83706, संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेको डेभरेयर क्लिक र इस्वीाराद्वारा प्रयोग गरिएको क्लिक बिक्रेताको एक दर्ता ट्रेडमार्क हो। रिटेलरको रूपमा क्लिक गर्नुहोस् बैंकको यी उत्पादनहरूको स्वीकृति, अनुमोदन वा समीक्षा वा यी उत्पादनको पदोन्नतिमा प्रयोग गरिएको कुनै दावी, कथन वा रायको आधार होइन।